कक्षा–५ को गणित सिकाइ समीक्षा: एकतिहाइ विद्यार्थी चिल्लै ! – NawalpurTimes.com
कक्षा–५ को गणित सिकाइ समीक्षा: एकतिहाइ विद्यार्थी चिल्लै !
प्रकाशित : २०७६ माघ ४ गते १०:३६
रोश्ना सुब्बा -शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सम्बन्धी पछिल्लो राष्ट्रिय अध्ययन (नासा–२०१८) अनुसार गणित विषयमा कक्षा–५ का विद्यार्थीको सिकाइस्तर अत्यन्त चिन्ताजनक छ । केन्द्रका अनुसार ३२ प्रतिशत विद्यार्थीले सो कक्षामा सिक्नुपर्ने मध्ये ५ प्रतिशत सीप मात्र सिकेका छन् । ती विद्यार्थीले नम्बरको अवधारणा नै बुझेका छैन का छैनन् । अर्को ४० प्रतिशत विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको २८ प्रतिशत सिकाइ गरेका छन् । समग्रमा ७२ प्रतिशत विद्यार्थीको गणित–सिकाइ न्यूनतम मापदण्ड भन्दा कमजोर पाइएको छ ।
सिकाइमा प्रभाव पार्ने महत्व
विद्यार्थीमाथि विद्यार्थीबाटै हुने दुव्र्यवहार र सिकाइको सम्बन्धलाई पनि अध्ययनले समेटेको छ । अध्ययनको नतिजा अनुसार ५३ प्रतिशत जति विद्यार्थीले कक्षा÷स्कूलमा कुनै न कुनै किसिमको दुव्र्यवहार खेपेका छन् । स्कूल÷कक्षामा जो जति धेरै हेपाइ (बुलिङ) र दुव्र्यवहारमा पर्छ, उसको सिकाइ त्यति नै कम पाइएको छ । अध्ययनले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीलाई विभिन्न नामले बोलाउने, साथीबाट एक्ल्याउने, जिस्काउने, हेप्ने, जबर्जस्ती कुनै काम गर्न लगाउने लगायतका ‘बुलिङ’ हुने गरेको देखाएको छ । यीमध्ये सबभन्दा बढी नाम बिगारेर या खराब नामले बोलाउने गरेको पाइएको छ ।
कक्षा–५ का एकतिहाइ विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको ५ प्रतिशत मात्रै सिक्नु भनेको तिनले कक्षामा खासै केही सिकेका छैनन् भन्ने बुझ्न्छि । त्यसमाथि यी विद्यार्थी कसरी कक्षा–५ मा आइपुगे भन्ने प्रश्न अझ् गम्भीर छ । ४० प्रतिशतले पाठ्यक्रमको एकतिहाइ भन्दा कम सिक्नु अर्थात् ७२ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ यति कमजोर हुनुको कारण के हुन सक्छ ?
सिकाइ–उपलब्धि परीक्षणका क्रममा सोधिएको अङ्कगणितको एउटा प्रश्न ८८ प्रतिशत विद्यार्थीले हल गर्न सकेनन् । यसबाट पाठ्यक्रम नै बोझ्लिो भएको त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यस्तै बीजगणितको एक प्रश्नमा आधाभन्दा कम अर्थात् ४६ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र उत्तर मिलाएका छन् । केन्द्रका शाखा प्रमुख श्याम आचार्य भन्छन्, “व्यवहारमा कहाँ कसरी लागू गर्ने भन्न नै गाह्रो जस्ता विषयवस्तु पनि पाठ्यक्रममा छन् । त्यसैले पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन प्रणाली र शिक्षण विधिका सम्बन्धमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ भनेर हामीले सुझव दिएका छौं ।” प्रा.डा. लुइँटेल पनि कतिपय विषयवस्तु व्यावहारिक नभएको स्वीकार्छन् । “६ डिजिटसम्मका जोड–घटाउ जस्ता अव्यावहारिक हिसाब किन चाहियो र ? अब त कम्प्युटर क्यालकुलेटर नै प्रयोग गर्छन् नि ! पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम स्तरीकरणका बारेमा काम गर्नु जरूरी छ”, प्रा.डा. लुइँटेल भन्छन् ।
०७६ कात्तिक शिक्षक मासिकमा प्रकाशित